Vaovao - Inona no soa entin'ny Mpaingo Bimini Top?
Fiarovana ny masoandro amin'ny rano
KOAtara-masoandro be wrehefa mivoaka amin'ny sambo misokatra ianao mety hiteraka may ratsy.Noho ny fomba ampitan'ny rano ny tara-masoandro eo amin'ny vatanao, ny masoandro azonao eny ambony sambo dia ratsy kokoa noho ny masoandro eny an-tanety.
Raha manarona satroka, akanjo mety, ary ny fampiharana ny masoandro dia hanampy amin'ny fiarovana anao amin'ny masoandro, dia tsy hanome anao ny aloky ny Bimini Top.
Inona no atao hoe Bimini Top?
Carver Bimini Tops dia hanome anao ny fandrakofana tsara indrindra mandritra ny sambo.
XGEAR Bimini Top cover misy rafitra metaly izay manohana lamba iray misokatra amin'ny sisiny,mampiasa ny vahaolana 600D lamba voaloko miaraka amin'ny indroa mifanindry zaitra izay tsara ho tantera-drano.Ny fonon'ny sambo Bimini Top miaraka amin'ny frame aluminium 1 inch misy modely 2: modely #1 misy tady azo amboarina 4, modely #2 fotsiny miaraka amin'ny tady azo amboarina 2 eo anoloana ary tsato-kazo 2 aoriana.Toy ny elo misy tongotra 4 mandrakotra ny ampahany amin'ny sambonao izy io.
Ny Bimini Tops dia manamora ny fialana sasatra amin'ny rano, mba hahafahanao mijanona amin'ny fanahiana amin'ny fanimbana ny hoditrao.Manolotra top-of-the-line Bimini izahay miaraka amin'ny fitaovana tsara indrindra amin'ny indostria.Misy loko 10 sy habe 7 hafa azo isafidianana.
Ahoana no nanaovana ny tops Bimini?
XGEAR Bimini Top covers tonga amin'ny halavany avy6'ho8' lava ary hiakatra amin'ny sambo izy ireo manomboka amin'ny inflatables kely mankany amin'ny sambo lehibe.Carver Bimini Tops dia tonga manara-penitra miaraka amin'ny fantsona aluminium sy fitaovana nylon.Ny tsipìka lehibe amin'ny tampony Bimini dia misy rindrina roa, mba hanomezana fitoniana fanampiny.Ny fitaovanay dia manana naoty ambony indrindra amin'ny indostrian'ny Bimini.Azonao atao ny misafidy ny haben'ny Bimini Top anao, na afaka mandeha miaraka amin'ny iray amin'ireo tolo-kevitry ny mpanamboatra anay.Mba hisafidianana ny habenao dia mila mahafantatra fotsiny ny sakany eo anelanelan'ny teboka fametrahanao ianao, ny haavony manomboka eo amin'ny toerana fametrahana ary ny halavan'ny lamba tianao indrindra.
Manamboatra ny saron-tsambo rehetra izahay, tampony bimini ho an'ny sambo, SY afaka miantoka tsara kokoa ny kalitao sy ny fahamaizana ho an'ny Carver Covers rehetra izahay.